UKhanyi Mbau ulaxaze Abomama
UKHANYI Mbau ushaye ngesithende umdlalo wethelevishini othi Abomama, ngoba esethole amadlelo aluhlaza. Isithombe: Twitter/ThomasGumede
Charles Khuzwayo | June 26, 2021
UKHANYI Mbau ushaye ngesithende umdlalo wethelevishini othi Abomama, ngoba esethole amadlelo aluhlaza kozokhonjiswa kwiNetflix osihloko sithi Happiness Ever After. UKhanyi uthe kumphathe kabi ukungalibambi iqhaza kulo mdlalo ngenxa yokuthi umatasatasa nokuqopha komunye.
"Okubuhlungu kungqubuzana izikhathi futhi isivumelwano enginaso nalo omunye umdlalo besingeke singivumele ukuba ngibe komunye umdlalo." UMbau ubelingisa indawo kaTshidi esizolingiswa manje nguzakwabo, uKhabonina Qubeka.
Abaningi bazokhumbula ukuthi nango-2006, uKhabonina ungene ezicathulweni zikaMbau ekubeni uDoobsie kwi-Muvhango. Kuzokhunjulwa ukuthi babevale isikhala esavuleka ngesikhathi uLindiwe Chibi ebulawa ngowayeyisoka lakhe.
UMbau uthe uyamthemba uKhabonina ukuthi uzoyidlala kahle indawo kaTshidi. I-Happiness Ever After isuselwe efilimini yango-2016 kaThabang Moleya eyayithi Happiness is a Four-Letter Word. Nayo yayisuselwe encwadini kaNozizwe Jele.
Kulo mdlalo uMbau uzobe elingisa indawo eqavile noRenate Stuurman. UMbau uthe le filimu ithe ukuqhela encwadini kodwa bazobonakala nabalingisi ababedlala kwi-Happiness is a Four-Letter Word.